Caawinta Warqada Muddada ee ku jirta Somalia
Ma u baahan tahay caawimaad qoris xirfadeed? Ka hel warqad tayo sare leh Kaalmeedka ugu Wanaagsan ee Muddada ah ee ku jira Somalia ku qoran dhammaan heerarka tacliimeed.
Helitaanka Caawinta Warqadda Xilliga Saxda ah
Waxa ugu muhiimsan marka ay timaado helitaanka waraaqaha xilliga ayaa ah helitaanka qorayaasha ugu fiican. Waxaad ubaahantahay inaad hubiso in waraaqahaaga shaqo uu qoro xirfadle khibrad leh. Waraaqahaaga muddada ayaa kuu noqon doona adeeg qoraal gaar ah oo erey bixin ah adiga gudaha Boqortooyada Midowday, xatooyo-bilaash ah oo si fiican loogu qoray qiimo jaban intii suurtagal ah, iyo waraaqaha ereyga ee iibsiga raqiiska ah waraaqahaaga muddada ayaa ka dhigaya geeddi-socodka oo dhan mid ka fudud sidaad moodeysay. .
Dhibaatada ugu caansan ee qorayaasha UK waa culeyska xad dhaafka ah ee ku jira waxyaabaha ku qoran waraaqahooda. Badanaa waxay diiradda saarayaan qorista lafteeda mana xiiseeyaan inay qoraan aragti ahaan. Markaad sameyso baaritaankaaga si aad uhesho qoraalo wanaagsan, waxaad arki doontaa inay jiraan dhowr qaybood oo kaladuwan oo qorayaasha ah. Waa muhiim inaad fahanto waxa ay tahay inay ku takhasusaan si marka aad shaqaaleyso, aad u ogaato sida saxda ah waxa laga filan karo iyaga.
Qorayaasha badankood ee Boqortooyada Midowday waxay qoraan waraaqo xilliyeed ganacsi ama dhaqaale. Waxay leeyihiin aag gaar ah oo takhasus ah oo ay ku fiicnaadeen, badanaana aaggan wuxuu noqon karaa mid faa'iido badan leh. Wax ka qorista warshadaha maaliyadeed waxay noqon karaan kuwo xiiso leh oo faa'iido leh maxaa yeelay shirkadaha maaliyadeed waxay badanaa bixin karaan tiro noocyo kala duwan ah oo warbixinno ah. Qorayaasha ka shaqeynaya shirkadahaan badiyaa waxay si fiican u yaqaanaan mowduuca waxayna soo saari karaan shaqo heer sare ah mudo gaaban. Qorayaasha ugu fiican ayaa sidoo kale awoodi doona inay ku siiyaan faylalka loo yaqaan 'portfolio' si aad u aragto badeecada la dhammeeyay oo ay kuu tusi karaan meelaha ay ka bannaan yihiin hagaajinta.
Adeegyo badan ayaa bixiya adeegyo kale oo aan ka ahayn qorista waraaqaha teeramka. Adeegyadan kale waxaa ka mid ah akhrinta, tafatirka, iyo dib u eegista. Qoraaga wanaagsan kuma fiicna kaliya qoraalka, laakiin sidoo kale wuxuu awood u leeyahay akhriska iyo fahmidda waxa loo baahan yahay si loo hubiyo inaad wax walba saxdo.
Haddii aad dhibaato ku qabtid waraaqahaaga shaqo, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ka fiirsato shaqaalaynta adeegga dib-u-akhrinta si uu kaaga caawiyo dibedda. Sidan oo kale, waxaad heli kartaa qof garanaya waxa ay sameynayaan si uu kuu caawiyo. shaqadana si fiican u qabsan kara marka ugu horaysa. In kasta oo adeegyada dib u eegistu aysan qaali ahayn sida kuwa kale ee kor lagu soo sheegay, waxaad awoodi doontaa inaad haysato qof ku siin kara kaalmo warqadeed oo ugu sarreysa marka lagu daro noocyada kale ee caawimaadda sidoo kale.
Adeegyada kale ka sokow, qorayaal badan ayaa sidoo kale leh softiweer erey-sameynta wanaagsan oo ay adeegsadaan markay wax ka beddelayaan warqaddaada. Waxaa jira noocyo kaladuwan oo erey-sameeyeyaal ah oo la heli karo oo laga kala xusho, waxaadna had iyo jeer bixin kartaa xoogaa yar oo dheeri ah si aad mid u habeyso si aad u daboosho baahiyahaaga. Barnaamijka softiweerku waa inuu lahaadaa astaamo badan oo waxtar u leh baahidaada qoraal, laakiin waa inaad marwalba iska hubisaa softiweerka si aad u hubiso inuu u sameeyo wax kasta oo aad ugu baahan tahay.
Qorayaal badan ayaa sidoo kale bixiya awood ay dib ugu eegaan shaqadooda lacag. Tani waxay kaa caawineysaa inaad dib u eegto oo aad nadiifiso shaqadaada oo aad u hesho warqadda sida ugufiican ee ay noqon karto. Tifatire weyn ayaa ogaan doona waxa adiga muhiimka kuu ah iyo waxa aad doorbideyso inaad ku aragto waraaqahaaga. Sidoo kale waa inaad hubisaa inay yaqaanaan sida loo sameeyo habsami u socodka ereyga.
Ugu dambeyntiina, waxaad sidoo kale weydiisan kartaa adeeggaaga inuu kaa caawiyo inaad iibsato waraaqahaaga muddada si aad ugu abuuri karto iyaga oo magacaaga ku qoran. Tani waxay ku siin doontaa adiga xakameynta ereyadaada waxayna ka dhigeysaa wax soo saarka ugu dambeeya ee adigu kaliya. iyo kaaga. Inta badan ee aad ka ogtahay waraaqaha ereyga si aad u caawiso, ayaa aad ugu sii diyaar garoobi doontaa dukumiintigan muhiimka ah ee aad sida adag ugu shaqeyneyso inaad abuurto.